Dawladda Hoose Hargeysa oo la Wareegtay 45 Dugsi oo kuwa Dawladda ah |
Dawladda Hoose Hargeysa oo la Wareegtay 45 Dugsi oo kuwa Dawladda ah
Duqa caasimada Hargeysa, mudane Cabdikariim Axmed Mooge, ayaa sheegay in ay la wareegeen 45 dugsi oo hoose dhexe ahna kuwa dawlada, isla markaana ay doonayaan in ay adeeg bixintooda waxbarasho noqoto mid fiicaan, isaga oo intaas raaciyay in ay jiraan 41 ka mida xarumaha hooyada iyo dhallaanka oo sidan oo kale ay ula wareegeen.
Sidoo kale waxa uu ka hadlay ololihii ay ku nadiifiyeen dooxa weyn ee magaalada Hargeysa, waxaanu sigaar ah u xusay ahmiyada ay dooxa siinayaan, isaga oo carabka ku adkeeyay in aan dooxa wax ciid ah laga qaadi karin, isaga oo intaas ku daray suuqyada waa weyn ee gudaha caasimada ay ka fuliyeen olole waddo banayn ah.
Dhanka kale waxa uu is’dultaagay jidad waa weyn oo ay dib u habayn iyo dayactirba ku sameeyeen.
Waxa kale oo uu faahfaahin ka bixiyay lo’dii lagu dhaqan jiray gudaha caasimada oo muwaadiniintii’lahaa ay ka iibsadeen, isla markaana ay siyeen ciidanka booliska Somaliland, iyada oo ciidankuna lo’daasi ay ku dhaqdaan banka Wajaale.
Maayir Mooge ayaa tilmaamay in meelaha bulshadu ku badan tahay ay dhireyn ku sameyn doonaan, dadkana ugu baaqay in guryahooda dhir ku hor beeraan, si caasimaadu u noqoto mid cagaaran oo la jaanqaada magaalooyinka kale ee dunida.
Waxa uu sidan ka sheegay mar uu shalay hor tagay guddida joogtada ee golaha guurtida Somaliland, isaga iyo agaasimaha maaliyada ee dawladda hoose, isaga oo uga warbixiyay dadaalo hor leh oo ay ku dardargelinayaan nadaafada caasimada, isla markaana bilicda magaalada kor loogu qaadayo.isaga iyo agaasimaha maamulka iyo lacagta.
Waxaanu yidhi isaga oo arrimahaasi ka hadlaya. “Waxa aanu maanta gacanta ku hayna oo aanu la soo wareegnay 45 iskuul, oo hoose dhexe oo aanu doonayna in ay kula tartami karaan dugsiyada gaarka loo leeyahay, aqoonta lagu bixiyo haddii ay tahay, degaan ahaan goob ku habboon waxbarashada in ay tahay.
waxaan rajjeynaya in aad nala soo eegtaan iskuuladaasi hada sida ay yihiin iyo markii hore sida ay ahaayeen, hadaad eegto degaankiisa, nadaafadiisa, fasalka carruurtu wax ku baranayso iyo waliba kuraastiisa, waxa qorshahayagu yahay boqolkiiba boqol sida xeerku nagu waajibiyay in aanu waxbarashada ula soo wareegno.
dugsiyada hadda aanu la wareegnay waxa aanu leenahay in aanu dayactirno, in suuliyada aanu u hagaajino, in aanu mushaharka nadiifisooyinka bixino, waardiyayaasha bixino, 45-ka dugsi maamulayaashooda waxa aanu siinaa mushahar”